Hanomboka handoa an'i Irlandy ny tapitrisa tapitrisa i Apple amin'ny fanalavirana haba | Avy amin'ny mac aho
Apple hanomboka handoa an'i Irlandy an-tapitrisany trosa amin'ny fisorohana hetra
Izahay dia eo am-piandohan'ny volana farany amin'ny taona 2017 ary, ahoana no hitrangany raha tsy izany, dia tsy dia nanam-potoana firy izahay hahalala izay hataon'ny telovolana ho an'ny orinasa Cupertino. Ny iray amin'ireo lafiny misokatra amin'ity taona 2018 ity dia ny Nisokatra ny fitoriana tany Eropa noho ny fanalavirana haba nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay tany Irlandy.
Amin'izany fomba izany no ahalalantsika fa, taorian'ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera eropeana tamin'ny taon-dasa momba ny fikarakarana hetra tany Irlandy niaraka tamin'i Apple hanomboka handoa ny $ 14.500 XNUMX tapitrisa ny orinasa manana trosa mandritra ny taona maro fanazaran-tena tany amin'ny kaontinanta eropeana.
Amin'izany fomba izany, antenaina fa hanomboka handoa ity hetra haba be ity i Apple mandritra ny telovolana voalohany amin'ny taona 2018. Farany, ny firenena Irlanda dia hanomboka handray ny fandoavam-bola rehetra aloaky ny andrana teknolojia.
Mahaliana farafaharatsiny ny raharaha: Apple sy Irlandy (ampahany nahazo tombony ary ampahany noheverina fa naratra) Niady nifanila nanohitra ny fanapahana izy ireo (fahafantarana ny vola miditra amin'ny ho avy izay hijanonan'ny orinasa amerikana avaratra ao amin'ny firenena noho ny tombotsoan'ny fepetra ankehitriny).
Ny fandoavam-bola dia hatao tsikelikely ary, satria manamafy i Apple fa be loatra ny kajy ny isa, hangonina ao anaty tahiry fitehirizana raha mbola misokatra ity fomba ity ary tanterahina any amin'ny repoblika Irlandy, izay anaovana fandinihana lalina ny hetra aloan'ny orinasa paoma.
Paska Donohoe, Minisitry ny Vola ao amin'ny Repoblikan'i Irlandy, nanome toky fa hanomboka mandritra ny telovolana voalohany amin'ity taona 2018 ity ny fizotrany ary rehefa tonga ny volana janoary dia hanana fampahalalana misimisy kokoa momba ireo dingana hatao izahay hiantohana ny fifanarahana misy eo amin'ny roa tonta voarohirohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple hanomboka handoa an'i Irlandy an-tapitrisany trosa amin'ny fisorohana hetra
Manampy an'i Apple Watch ny programa fanodinana Apple
AirPods dia hijanona ho sofin-tsofin'i Apple be mpividy indrindra amin'ny taona 2018